Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Daawada Baili
Guriga > Alaabta > Qalabka Isbitaalka > Daaweynta hurdada iyo neefsiga
Hurdada iyo Daawaynta Neefsashada: Daawaynta neefsalka Aerosol waa hab lagu daweeyo cudurrada iyadoo hawada laga neefsado afka iyo sanka. Neefsashada iyo aerosolku waxay u horseedaan xuubka xabka ee dheecaanka dheecaanka mareenka neefsiga, malaxda iyo bakteeriyada bakteeriyada, waxayna leeyihiin saamaynta kicinta mareenka neefsiga laftiisa si loo nadiifiyo. In neefta, boronkiitada, emphysema, cystic fibrosis, kaydinta borotiinka alveolar iyo bronchopneumonia iyo cudurrada kale, neefsashada ee buufin gaar ah (aerosol), yaraynaysaa bronchospasm, yaraynaysaa bararka xuubka iyo dheecaanka boronkiitada dareere ah, kor u xakameynta habka caabuqa bronki iyo hagaajinta shaqada hawo.
Daaweynta Hurdada iyo Neefsashada waxaa loola jeedaa isticmaalka kaniiniyada hurdada ama mashiinka hurdada ee korontada si ay u kiciso hurdo ama u dheereyso wakhtiga hurdada si loo daaweeyo cudurrada, loo isticmaalo daaweynta neurosis. Ku dhaca qaybta daawada nafta, daawaynta hurdada waxay wanaajisaa shaqada maskaxda waxayna kor u qaadaa bogsashada.
Magnet Magnet Ka-hortagga Khuurada Sanka Aid Clip Joojiyaha Khuurada
Magnet Magnet Ka-hortagga Khuurada Sanka ee Clip Snore Stopper waxaa laga sameeyay PS jilicsan iyo PVC, joojiyaha khuurada ayaa si tartiib ah ugu habboon dullalka sankaaga, iyaga oo kala fogeynaya oo ka dhigaya neefsasho fudud oo aamusnaan leh. Naftaada iyo lammaanahaaga sariirta kula dawee habeen aamusnaan ah oo ku raaxayso khibradda hurdada oo aad dareemayso nafis iyo diyaar u ah inaad wajahdo maalinta. Silicon jilicsan ayaa kuu ogolaaneysa inaad seexato oo aadan xitaa ogeyn inaad xiran tahay qalabka snore-ka.
Aaladaha Xalka Khuurada Ka-hortagga Khuurada
Aaladaha Xallinta Khuurada Ka-hortagga Khuuradu waa nadiif, waarta oo fudud. Waa joojiyaha khuurada degdega ah iyo hagaajinta neefsashada. Qalabka khuurada ka hortagga wuxuu ku haboon yahay nooc kasta oo dulalka sanka ah. Mashiinnada dhimista khuurada ayaa si cilmiyeysan loogu qaabeeyey si loo kordhiyo socodka hawada ee waddooyinka marinnada sanka. Way ka badbaadsan tahay in la helo ogsijiin badan oo la neefsado hawo nadiif ah.
Sifeeyaha Hawada ABS Silikoon
Sifeeyaha Hawada ABS Silikoon waa nadiif, waara oo fudud. Waa joojiyaha khuurada degdega ah iyo hagaajinta neefsashada. Mashiinnada dhimista khuurada ayaa si cilmiyeysan loogu qaabeeyey si loo kordhiyo socodka hawada ee waddooyinka marinnada sanka. Way ka badbaadsan tahay in la helo ogsijiin badan oo la neefsado hawo nadiif ah.
Jooji Aaladda khuurada
Stop Snoring Aaladda waxa laga sameeyaa silikoon jilicsan, joogiyaha khuurada ayaa si tartiib ah ugu habboon dulalka sankaaga, iyaga oo kala fogaynaya oo ka dhigaya neefsasho fudud oo aamusnaan leh. Naftaada iyo lammaanahaaga sariirta kula dawee habeen aamusnaan ah oo ku raaxayso khibradda hurdada oo aad dareemayso nafis iyo diyaar u ah inaad wajahdo maalinta. Silicon jilicsan ayaa kuu ogolaaneysa inaad seexato oo aadan xitaa ogeyn inaad xiran tahay qalabka snore-ka.
Nebulizer Mesh Mesh la qaadan karo ee Guriga
Mesh Nebulizer-ka Guryaha La Qaadan Karo oo leh saameyn wanaagsan, cabbir yar, waxaa sameeyay tignoolajiyada cusub ee baarista mesh-ga yar. Waa aamusnaan, qaadis fudud oo nadiif ah, leh laba qaab oo lagu doorto, si toos ah ayaa loo dami karaa 5 ama 10 daqiiqo gudahood. Waxay leedahay qaybo atomized ah oo fiican, isticmaal ahaan aamusnaanta, buufinta ceeryaamo joogta ah.
Jeebka Yaryar ee La Qaadan Karo Yaryar Ultrasonic Mesh Atomizer
Waxaan bixinaa Mini jeebka la qaadan karo oo yar atomizer Ultrasonic Mesh kaas oo iska leh nooca ugu dambeeya ee nebulizer. Waxay isku daraysaa sifooyinka nebulizer-ka cadaadiska iyo nebulizer ultrasonic. Nebulizer-ka waxaa lagu buufiyaa iyadoo la isticmaalayo gariir yar oo ultrasonic iyo dhismaha madaxa buufinta mesh. Nebulizer-yada caafimaadka guriga ee loogu talagalay carruurta qaba neefta, oo ay fududahay in meel kasta lagu qaado.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Daaweynta hurdada iyo neefsiga oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Daaweynta hurdada iyo neefsiga soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Daaweynta hurdada iyo neefsiga la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.